တရုတ် Qingdao ပုံမှစက် - ထုတ်ယူခြင်းစက်လိုင်းလျှော်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ပူပြင်းတဲ့ Feed ရော်ဘာ Extruding စက်
Computer ကိုထိန်းချုပ်ရေးကော်လံအမျိုးအစားရော်ဘာ Vulcanizer
ရော်ဘာပေါ်ကိုခါးပတ် Vulcanizers ဂဟေဆော်ခြင်းစက်
သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလျှော်ထုတ်ယူခြင်းစက်လိုင်းအများဆုံးတရုတ်ပြည်တွင်းမြို့ကြီးများဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် / သို့မဟုတ်အသီးအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်, ကျယ်ပြန့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အဆင့်မြင့် concept ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျကိုစုပ်ယူသည်။ ကျနော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ၏တပြင်လုံးကိုလိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ devices တွေကိုနည်းပညာရင့်ကျက်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသန့်စင်နေကြတယ်, ညှစ်, disinfected, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြတ်ကောက်ယူနှင့်တိကျခိုင်မာစွာစမ်းသပ်ပြီးနောက်, သူတို့အသေး packages များအတွက်နေထိုင်သူစျေးကွက်သို့ သွား. , ကြီးမားတဲ့ p အတွက်စစ်သုံးအိုးခွက်ဈေးကွက်သို့သွား ...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 10000-30000
သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလျှော်ထုတ်ယူခြင်းစက်လိုင်းအများဆုံးတရုတ်ပြည်တွင်းမြို့ကြီးများဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် / သို့မဟုတ်အသီးအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်, ကျယ်ပြန့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပြောင်းအလဲနဲ့အဆင့်မြင့် concept ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျကိုစုပ်ယူသည်။ ကျနော်တို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ၏တပြင်လုံးကိုလိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ devices တွေကိုနည်းပညာရင့်ကျက်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသန့်စင်နေကြတယ်, ညှစ်, disinfected, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြတ်ကောက်ယူနှင့်တိကျခိုင်မာစွာစမ်းသပ်ပြီးနောက်, သူတို့အသေး packages များအတွက်နေထိုင်သူစျေးကွက်သို့ သွား. , ကြီးမားတဲ့ packages များအတွက်စစ်သုံးအိုးခွက်ဈေးကွက်သို့သွားပါ။
အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွစသည်တို့ကို, သန့်ရှင်းသန့်ရှင်းရေး, အဆင်ပြေပြေနဲ့လုံခြုံ၏အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူများမှာ
ဂေါ်ဖီထုပ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ပန်းဂေါ်ဖီ, ဆလတ်, မုန်လာဥနီ, မှို, အစိမ်းငရုတ်ကောင်း, အာလူး, ခရမ်းချဉ်သီး, အစိမ်းပဲ, ပဲစေ့တွေဟာနှင့်အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်: အဆိုပါထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
စက်အရည်အသွေးမြင့် SUS304 သံမဏိနဲ့လုပ်ထားတဲ့သည်အမျိုးသားရေးအစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ, ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိအဆိုပါဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွ cleam မှပူဖောင်းလိပ် / ပွတ်တိုက် / ရေမှုန်ရေမွှားနည်းပညာချမှတ်။
လိုင်းအတွက်စက်တွေပူဖောင်းအပြည့်အဝကိုရေပြုတ်တူနိုင်အောင်, အမြင့်, အ casters / ကြမ်းပြင်ဘီး, အောက်စီဂျင်စုပ်စက်ဓာတ်ငွေ့ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိသည်။ ယင်းပူဖောင်းထွက်ကုန်များ၏တုန်ခါမှု
ပိုးသတ်ဆေးလိုင်း: ပိုးသန့်ဆေးအချိန်ဖောက်သည် '' အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီဒီဇိုင်းနှင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ မှုန်ရေမွှားနှင့်ရေရေချိုးတော်အားဖြင့်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွပို့ကုန်စံတွေ့ဆုံရန်ပါစေ။
ရေပန်း / မှုန်ရေမွှားလိုင်း: အပိုးသန့်ဆေးပြီးနောက်ဒုတိယစင်ကြယ်သောရေကိုရေမှုန်ရေမွှားဘို့ရေကို save လုပ်ပါ။
ခြောက်သွေ့လိုင်း; အဆိုပါထုတ်ကုန်ပိုးသန့်ဆေးပြီးနောက်ဒုတိယညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့, တစ်ဦးအမြန်ခြောက်သွေ့ရ။
ညစ်ညူး / အထွေထွေရွှေ့ဖို့အိုဇုနျးပိုးသတ်, မြင့်မားသောဖိအားမှုန်ရေမွှားများနှင့်ဖြီးထည့်သွင်းဖို့အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုအရသိရသည်။
desalination သန့်ရှင်းရေးအဖြစ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုခြင်း, မျိုးစုံ set ကိုစက်အမျိုးမျိုးဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အသီးအပွပြုမူဆက်ဆံကိုသုံးနိုင်သည်။
ယခင်: ပူပြင်းတဲ့ရေပြုတ် Tank စက်
နောက်တစ်ခု: သုံး Pot စင်ပြိုင်အမျိုးအစားစားနပ်ရိက္ခာထုတ်ယူခြင်း Retort စက်
လတ်ဆတ်သော leafy အမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အဝတ်လျှော်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်လိုင်း